व्यापार घाटा कम गर्न साना तथा मझौला व्यवसायीले के गर्ने? :: Setopati
शेरजंग बहादुर चन्द वैशाख २६
विश्व कोभिड-१९ को महामारीले फेरि ग्रसित हुँदै छ। नेपाल र भारतमा यो नयाँ भेरियन्ट कोरोनाले झन् ठूलो असर परिरहेको छ।
विगत १४ महिनादेखि नेपाली व्यवसाय थला परेको छ। बीचमा ३/४ महिना अलिकति उकालो लागेको व्यवसाय फेरि रोकिएको छ। आम व्यवसायीमा कसरी आफ्नो व्यवसाय बचाइराख्ने‚ कसरी आफ्नो घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ।
यस्तो अवस्थामा व्यापारलाई कसरी बचाइराख्ने भन्ने नयाँ नयाँ तरिका निस्कदै आइरहेका छन्। नेपालमा पनि धेरै न्यून संख्यामा साना तथा मझौला व्यापारीहरुले नयाँ तरिका अपनाएर व्यापारबाट राम्रो फाइदा गरेको देखिएको छ। तर आम व्यापारी व्यवसायीले यस्तो गर्न सकेका छैनन्।
हालको यस महामारीमा साना तथा मझौला व्यापारी व्यवसायीले निम्न तरिकाहरु अपनाउँदा व्यापारबाट हुने घाटाको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यस्ता व्यवसायीले निम्न बुँदाहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ।
- न्यूनतम आवश्यकताको स्तरमा बच्नुस्
साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायी नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छन्। जुन स्तरमा तपाई बाँचिरहेको हुनुहुन्छ, हुन सक्छ त्यो स्तरमा बढी खर्च भइरहेको छ कि? यस कुराको राम्ररी आकलन गर्नुस्‚ अध्ययन गर्नुस् तथा न्यूनतम आवश्यक स्तरमा जीवनयापन गर्ने कोसिस गर्नुस्।
अरुको देखासिकीमा नजानुस्। अस्तित्वको किनारामा बाच्नुस् र त्यही नै खर्च गर्नुस्। अधिक समयसम्म लड्नका लागि न्यूनतम आवश्यकताको स्तरमा बाच्नुस्, बढी बचत गरी सुरक्षित लगानी गर्नुहोस।
तपाईले राम्रो प्रतिष्ठा कमाउनका लागि भविष्यको धनमा जाँच गरी लगानी गर्नुस्। पैसा निशुल्क कमाइँदैन, त्यस कारण कमाउने शुल्क जम्मा गर्नुस्।
-वित्तीय विचार प्रकृया परिवर्तन गर्नुस्
तपाईले गरिरहेको काम प्रकृया वित्तीय विचार प्रकृयाभन्दा आफ्नै तरिकाको हुन सक्दछ। तपाईले निसन्देह वित्तीय शिक्षाको सही महत्व थाहा पाउने कोसिस गर्नुस्। आफ्नो वित्तीय प्रकृयामा नयाँपन ल्याउनुस्।
यस्ता महामारीले भविष्यमा आर्थिक मामिलामा नमेटिने छापहरु लगाउँछ। त्यसकारण आफ्नो वित्तीय प्रकृया प्रणालीमा सुधार ल्याउनुस्। हालको मन्दीले भोलि वित्तीय अवशेष रहने कुरामा शंका नभएको कारण आजैदेखि विचार‚ प्रकृया परिवर्तन गर्नुस्।
-पैसालाई नियन्त्रण गर्नुस्
पैसामा शक्ति हुँदैन। वास्तवमा पैसाको शक्ति परिचालित गर्ने व्यक्तिको दिमागमा हुन्छ। जसले पैशा राम्ररी नियन्त्रण गर्न सक्छ, परिचालन गर्न सक्छ, सही गलत पत्ता लगाउन सक्छ, त्यो नै पैसाको रक्षा गर्दछ।
साना तथा मझौला व्यापारीले पैसा ठूला उद्यमीले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दछन् भनी सोच्छन्। त्यो विल्कुलै गलत हो। पैसा भनेको एक उपकरण (साधन) मात्र हो जसलाई बस्तु र सेवाहरु खरिद गर्ने प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण पैसालाई नियन्त्रण गर्नुस् र यस्तो महामारीको बेला सही रुपमा प्रयोग गर्नुस्।
-विविधता लगानी गरी जोखिम कम गर्नुस्
आम नेपालीको विविधता लगानी गर्ने बानी छ तर अनावश्यक रुपमा बढी लगानी भएको देखिन्छ। साना तथा मझौला व्यावसायीले विविधतामा सुरक्षित लगानी गरी आफ्नो व्यापारको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।
आधुनिक वित्त तथा अर्थशास्त्रले विविधिकरणको उपयोगिता अपनाएको छ।
म्युचुअल फन्ड यसको अकाट्य उदारण हो। रियल स्टेट‚ केही शेयरहरु, कृषिमा लगानी नेपालका लागि उपयुक्त लगानी गर्ने ठाउँ हुन्। आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी दर्जनौं ठाउँमा विविधता गरी खर्च गर्नुस् जसले तपाईको हालको व्यापार मन्दीको जोखिमलाई कम गर्नेछ।
-पैसालाई बुद्धिले बचत तथा लगानी गर्नुस्
पैसा खर्च गर्दा अहिले गर्ने कि पछि खर्च गर्ने विकल्प खोज्नुस। साना तथा मझौला व्यवासायीको लागि लगानी बचतको एक हिस्सा हो। यदि तपाई गलत ठाउँमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाई धेरै कुरा गुमाउन सक्नु हुन्छ।
अर्थशास्त्रले पैसालाई चलायमान बनाएन भने त्यो पैसा ढुंगा हो भन्छ। यदि तपाईसंग दश लाख रुपैयाँ छ र तपाईले त्यो दश लाख ६ महिना घरमै राख्नु भयो र त्यसको प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो पैसा राख्नु र ढुंगा घरमा राख्नुमा फरक हुँदैन बरु ६ महिनामा त्यो दश लाख पैसाको क्रय शक्ति घट्दै जान्छ।
त्यसकारण तपाई पैसा बचत गर्नुहोस् र लगानी गर्नुस् तर लगानीका लागि मात्रै लगानी नगर्नुस्। लगानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी लक्ष्य लिई लगानी गर्नुस्। तपाईका लगानी बचत जति दरिला हुन्छन्, त्यति नै बढी तपाईले यस महामारीमा पैसालाई बुद्धिले बचत तथा लगानी गर्नुस्।
- कुशलतापूर्वक व्यक्तिगत कोष प्रयोग गर्नुस्
साना तथा मझौला व्यवसायहरुले यस्तो महामारीले मन्दी भएको बेला अनावश्यक बोझ थपेर व्यवसाय नगर्नुस्। बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप संकलन भइरहेको अवस्थामा सजिलै ऋण पाइन्छ भनेर पनि ऋण लगानी नगर्नुस्। त्यो ऋण जुनसुकै हालतमा पनि तिर्नु पर्ने नै हुन्छ।
त्यसकारण कुशलतापूर्वक व्यक्तिगत कोषको मात्र प्रयोग गर्नुस्। साना व्यवसायका लागि त व्यक्तिगत कोष बाहेक अरु सोच्ने अवस्था नै नरहेको बेला छ। बिना कोष व्यवसाय नहुने भएतापनि यस्तो बेला व्यक्तिगत कोषको मात्र प्रयोग गर्नुस्।
-बजेटको विकास गर्नुस्
उद्योग व्यवसायमा एक फरक प्रकारको बजेट चाहिन्छ। नेपालमा साना तथा मझौला व्यावसायीहरुले बजेट निर्माण गरी काम गरेको धेरै नै कम पाइन्छ, फलस्वरुप व्यापारमा हानी हुने बढी जोखिम रहन्छ।
यदि तपाईसँग वासलात नै छैन भने तपाईले पैसा कमाएको वा गुमाएको पत्तो रहँदैन। त्यसकारण व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा ल्याउन बजेट बनाउनुस्। यस बजेटमा आपतकालीन कोषको पनि सिर्जना गर्नुस्। महामारीले व्यापारमा मन्दी भएको बेला यस्ता बजेट धेरै नै प्रभावकारी हुन्छन्।
-आफ्नो धन/सम्पत्तीलाई नियन्त्रणमा लिनुस्
अनावश्यक रुपमा धेरै ठाउँमा लगानी तथा स-साना सर समानमा रकम खर्च गर्ने साना तथा मझौला व्यावसायीहरुको बानी रहेको नेपालमा अध्ययनले देखाउँछ। त्यसकारण आफूले लगानी गरेको धन/सम्पनी चाहे त्यो भौतिक रुपमा होस् या नहोस् त्यसको सदुपयोग गरौँ।
आफ्नो लगानी परेको जुनसुकै धन/सम्पत्तीमा आफ्नो नियन्त्रण लिने काम गर्नाले यस अवस्थामा आफ्नो व्यापार घाटा हुने जोखिम घटाउन सकिन्छ।
यस मन्दीको वास्तविक नतिजा हाम्रो के हुने हो, यो अहिले कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। यदि साना तथा मझौला व्यवसायी वित्तीय रुपमा पूर्ण साक्षर हुन्थे भने सरकार र अर्थशास्त्रीहरुले सोच्ने विषय थिएन तर नेपालमा यस्तो अवस्था छैन।
साना तथा मझौला व्यापारीले आफ्नो सार भविष्यको लागि योजना बनाएर वरिपरि घुम्नु पर्ने हुन्छ। यसैमा सबै केन्द्रित रहनु पर्ने देखिन्छ। तब मात्र हामी आजको हुने व्यापार घाटा जोखिमबाट बच्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २६, २०७८, १३:०९:००